Home Wararka Xiriirkii Kenya Marka hore Qaabkee loo Jaray, Sideesa loo soo Celiyey...
Xiriirkii Kenya Marka hore Qaabkee loo Jaray, Sideesa loo soo Celiyey hadda.
Waxay u muuqataa in Dowlada Kenya ay rumeysan tahay in Soomaaliya aysan lahayn dowlad leh sharciyad dastuuri ah iyo mid siyaasadeed haysata oo waxaa u siman DG iyo Dowladda Federalka oo waa wada masuuliyiinta waayo markaad fiirisid ixtiraam darrada ka muqata bayaanka Wasaaradda Arimaha Dibada ee Kenya. Waxaa cad in Kenyaanku si cad uga wareegeen inay ku qoraan “Dowlada Soomaaliya” ama “Dowlada Federaalka Soomaaliya“, waxayse noogu yeereen “Masuuliyiinta Soomaaliya“
Arrintaan oo ah heerkiis ugu hooseeyey oo uu Farmajo gaarsiiyo dalkeenna kadib markii uu ku tuntay wax kasta oo dal lagu yaqiin sida distuurka, madaxbannaanida , diplomasiyadda iyo barlamankii dalka oo uu kireystay una qaada hees kasta oo uu rabo sax iyo khalad oo iyagana bixin doona khaladkaas.
Xiriirkan markii la jarayey habeen bar ayaa Dubbe oo malaha qaad ka soo kacay la dhawaaqay, iyadoon aan loo marin hannaanka loo maro hoos u dhigga, ama jarista xiriirka dal kale. Kenyaan ku markaas waxay sheegeen inaysan helin qoraal rasmi ah oo arrintaas ku saabsan in Somaliy ay jartay xiriirkii labada dowladood. Lama iskama jari Karin xiriir laba dal oo wax badan wadaagga oo waxyaabo badan oo ka horreeyey ayaa loo baahnaa sida in la kulmiyo hay’adaha dalka oo la eego cawaaqibka ay nagu yeelan karto iyo dhibaatada ay u geysan karto muwadiniinta Somaliyeed ee dalkaas deggan iyo kuwa qaxootiga ku ah. Balse ayaa si waayeelnimo ah u dhaqan tahay oo wax tallaabo ah ma qaadin waxayna sameeyeen sida waalidka uu ku sameeyo marka ilmaha xanaaqo oo laga aamuso intuu ka soo degayo.
Ciidamada Kenya waxay ku jiraan dalka oo taliayayaashooda waxay deggan yihiin Xalane oo waxay ka mid yihiin ciidanka AMISOM.
Waxaa uu Dubbihii diiqyeerka dhawaqii jiary uu noo sheegay in lagu eedeyey in Kenya uga hiillisay Axmed Madoobe gobolka Gedo oo soo abaabushay Cabdarshiid Jenan oo ahaa Wasiirka Amniga Jubland oo ay xataa Kenya ka dhaxeysay wada shaqeyn dhinaca Aminiga ah. Hasa yeshee, ninkii inuu dhibkaas dhigay lagu eedeynayey, Cabdirashiid Janan wuxuu noqday tol iyo qaraabo u dhow waayeelka maanlaawaha ah ee dalka hogaamiya. Janan waxaa la soo dhoweeyey sidii geesi loona fidyey qiimeyn weyn kadibna loo lacageeeyey wixii lagu eedeynayey inuu halleynayey oo dibadda caafimaad loogu diray.
Laakiin weli Kenya waa u xanaaqsaneyn iyadoo ciddii lagu eedeynayey inay soo hubeysay aan hoosta gashannay.
Dhinaca kale, dad ayaa ku dooda in Kenya qaadkeeda iyo dhibkiisa uu naga joogsaday, laakiin waxaa yaab leh ruqsadda soo dejinta qaadka in isla markiiba la siiyey Xasan Cabdullaahi Farmajo oo ah Madaxweyne Farmajo walaalkiis iyadooaan wax kaalmo ah la siinin dad badan oo ay noloshooda ku xerneyd oo nolol maalmeed ka raadsan jiray qaadka, loona sheegay inuu Itoobiyada aan walaalownay uu ka keeno.
Haddaba shalay markii uu cararay Dubbe oo diiqyeerka soo hadli jiray waxaa soo istaagay Alcadaala oo la leeyahay waxaa uu ku jiraa boos riixad iyo dadaal ah Farmaajow i arag, waxaanu noo sheegay in xiriirkii sida xun loo jaray ee dalka Kenya, haddana si xun loo soo celiyey iyadoo aan gole wasiirro la marsiin, iyadoo aysan ogeyn wasaaraddii ku shaqada lahayd ee Arrimaha dibadda, iyadoo la iska warsan wixii laga dheefay gooytiisa iyo iyadoon xataa Kenya la ogeysiin.
Maxamed Cabdullahi Farmajo dalkaan waxaa uu gaarsiiyey meeshii ugu xumeyd ama ugu hooseysay taariikhdiisa, xataa markii gumeysiga loo noqdo oo Somalidu waxay lahayd qab iyo haybad ay mar waliba ku ilaashato danaheeda, waxaana tusaale dhow kuugu filan markii ay nagu qabsatay Kenya qeyb baddeenna badeenna xiriirka oo aan la dhaawicin ayaa waxaa la geeyey Maxkamada Adduunka dacwad taas oo hadda gabagabo iyo go’aan joogto.
Laakiin caawa dad badani waxay ka cabsanayaan in habeen bar madow oo mugdi ah uu soo dhawaaqo Alcadaala isagoo sheegaya inaan ka heshiinnay dacwaddii badda oo aan ogolaanay in baddeenna nala ku dhexdhexaadiyo, ka hor go’aanka maxakamadda, Kenya si aan u qeybsanno kheyraadka ku jira Dalka Qadarna ay Garwadeenna ka tahay si ay saamiyo uga iibasato shirkadaha shidaalka baara.
MOL oo 2017 bilowday inay ka digto Maxamed Cabdullahi Farmajo dhibaatada uu dalka gaarsiin karo waxay rajeyneysaa inuu khaladkan yahay kii ugu dambeeyey oo uu Farmajo galo sidaasna uu nagu dhaafo.